पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अब प्रतिलिटर कति पर्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अब प्रतिलिटर कति पर्छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो, अब प्रतिलिटर कति पर्छ ?
भदौ २४ गते, २०७६ - १२:२१
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाएको छ । एक सय नौ रुपैयाँ प्रति लिटरमा पाइने प्रेट्रोल, ९७ रूपैयाँ प्रति लिटरमा पाइने गरेको डिजेल र मट्टितेलमा दुई रूपैयाँको दरको मुल्य घटेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।
मंगलबारबाट पाइपलाइन मार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आउने भएपछि मुल्य घटाइएको निगमका प्रवन्ध निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पैडेलले बताए ।
मुल्य घटेसँगै काठमाडौंको नयाँ खुद्रा मुल्य पेट्रोल प्रति लिटर एक सय सात रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रति लिटर ९५ रूपैयाँ कायम भएको छ ।
घटेको पेट्रोलको मूल्य मंगलबार १२ दिउँसो बजेदेखि नै लागु हुने निगमले जनाएको छ ।
भदौ २४ गते, २०७६ - १२:२१ मा प्रकाशित